Maxkamad ku taal London oo 5 sano ku xukuntey nin Al-Shabaab taagaaro siiyey – SBC
Maxkamad ku taal London oo 5 sano ku xukuntey nin Al-Shabaab taagaaro siiyey
Posted by editor on Maarso 11, 2012 Comments
Maxkamad ku taal magaalada London ee caasimada UK ayaa ku soo oogtey dacwad nin British ah oo lagu helay dambiyo la xiriira inuu dhaqaale u uriyey xarakada Al-Shabaab isla markaana uu taageero siiyey dhalinyaro Jihaad doon ah oo Soomaaliya tagtey.
Ninkan oo lagu magacaabo Shabaaz Hussain oo 28 sano jir ah ayaa la sheegay in lacago uu ka ururiyey muslimiinta wadanka Ingiriiska ku dhaqan, lacagtaasi oo cadadkeedu gaarayo 15 kun oo doolar ayuu u direy hogaamiyeyaasha Shabaabka Soomaaliya sida ay sheegeen kooxaha dacwad ku oogayaasha ah, lacagahaasi oo uu uririyey sanadihii 2009 iyo 2010
Shabaaz Hussaina ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in uu ka shaqeeyey sadex dhalinyaro ah oo ay saaxiibo yihiin oo ka tagey UK una socdaalay Soomaaliya si ay uga qayb galaan wax lagu yeeray falal argagixiso.
Guriga ninkaasi uu deganaa oo ku yaal xaafada Stepney ee bariga magaalada London ayaa Booliiska UK ee loo yaqaan Metropolitan Police qaybtooda la dagaalanka argagixisada waxay sheegeen inay ka helaan waxyaabo loo adeegsado qaraxyada.
Dacwadaha ninkan lagu soo oogay ayaa waxaa sidoo kale loo cuskaday cadeymo ku aadan xiriiro dhanka telefoonka oo uu sameeyey.
Qaadiga maxkamada Woolwich Crown Court ee magaalada London Mr Justice Calvert-Smith oo la hadlayey ninka la soo taagay maxkamada wuxuu u sheegay in dhaqaalaha uu diray loo adeegsan karo si dad badan iyo si toos ah falal argagixiso, isla markaana uu dhaqaale ku taageeray argagixiso isla markaana dhibaato loogu geysanayo dad aan waxba galabsan.
Ninkan lagu magacaabo Hussein ayaa maxkamadu ku soo oogtey dacwad 7 darajo ka kooban wuxuu qirtey in uu lacag u diray sadex nin oo saaxiibo ahaaayeen oo lagu kala magacaabo to Muhammed Jahangir, Tufual Ahmed, & Mohammed Shahim, kuwaasi oo dalka Ingiriiska ka aaday dagaalka Soomaaliya ka socda waxaase uu sheegay inaanu war u hayen waxa lacagtaasi loo adeegsanayo.
Sidoo kale haweeney dacwad ooge ah oo lagu magacaabo Sarah Whitehouse ayaa ku tilmaamtey guriga uu deganaa Hussein goob ay ka buuxaan waxyaabo xagjirnimo ah.
Sarah Whitehouse ayaa sheegtey in gurigaasi oo uu la deganaa Hussein waalidiintiis iyo walaalihiis laga helay Cajalado uu ku duuban yahay Cusama Bin Ladino oo Mareykanka si ba’an u weeraraya, qoraalo uu qoray wadaadka Abu Hamza oo la aamisan yahay in uu abuuro fikrado lidi ku ah danaha reer Galbeedka.
Laakiin qareenka ninkaasi difaaca Imran Khan in Hussein uu alaabta u hayey dad kale oo u dhiibtey balse aan la heyn wax cadeymo ah oo muujinaya in uu daawaday muuqaladaasi ama cadeymahaasi.
Shabaaz Hussain ayaa horey ugu shaqeysan jirin caawiye macalin, balse waxaa la sheegay in markii uu ku hawlanaa hawlan aanu hayn wax shaqo ah, wuxuu dafiray eedeymaha dacwada afar darajo oo ka mid ah.